Nubia Red Magic 5G waa rasmi rasmi oo leh 144 Hz panel iyo Snapdragon 865 | Androidsis
Nubia waxay ugu dambayntii samaysay sarkaalkii aadka loo sugayay ee Red Magic 5G, Taleefanka casriga ah ee waxqabadka sare ee loogu talagalay gamer dadweynaha isla markaana runtii leh muuqaalo awood badan iyo qeexitaan farsamo, kuwaas oo inta badan ay wadaan Snapdragon 865, Qualcomm's king chip chip oo ah 7nm.
Telefoonku wuxuu la kulmay mid kasta iyo saadaal kasta oo aan daadaynay toddobaadyadii la soo dhaafay. Mid ka mid ah kuwan waxay ku xirnaayeen shaashaddiisa; Waxaa la sheegay in tani ay lahaan laheyd heerka ugu sarreysa ee cusbooneysiinta warshadaha casriga ah, waana ay leedahay.
1 Dhammaan wixii ku saabsan Nubia Red Magic 5G cusub: astaamaha iyo tilmaamaha farsamada
Dhammaan wixii ku saabsan Nubia Red Magic 5G cusub: astaamaha iyo tilmaamaha farsamada
Si laga bilaabo, naqshadeynta qalab-sare ee ciyaarta waa mid ka mid ah qodobbada ugu soo jiidashada badan. Red Magic 5G wuxuu leeyahay gadaal gadaal ah oo leh qaab "X" ah oo loo qaybiyay xariiq ku dhow inuu taleefanka kala badh gabi ahaanba u qaybiyo; Kani wuxuu ka kooban yahay magaca taxanaha iyo kamaradda gadaal saddex-geesoodka ah ee kore. Calaamadda 5G waxay ku taal dhinaca midig ee guddiga, taas oo macnaheedu yahay inay jirto taageero loogu talagalay shabakadda isku xirnaanta.
Shaashadda taleefanka ayaa ah farsamada AMOLED waxayna cabirkeedu yahay 6.65 inji. Xalka ay kani soo saarayso waa midka caadiga ah: 2,340 x 1,080 pixels, sidaasna ku bixinaya qaab 19.5: 9 ah. Waxa runti xiisaha u leh guddigan ayaa ah heerka cabbirka ee ay ku faanto, kaasoo ah 144 Hz. Shaki la'aan, cayaartooydu waxay ku raaxeysan doonaan waayo-aragnimo ciyaar aan la qiyaasi karin oo qalabkan ah, maaddaama oo ay leedahay muuqaallo muuqaallo siman, dheecaan leh iyo, sidaa darteed, markaa, ka sarreeya kuwa laga helo ku dhowaad dhammaan taleefannada casriga ah maanta. Waxyaabaha ayaa sii fiicnaanaya tan iyo markii shirkaddu ay sheegtay in heerka tijaabada uu yahay 240 Hz ... Xog ahaan in la tixgeliyo, qaabeynta heerka cabbirka cusbooneysiinta ee taleefannada gacanta ee caadiga ah iyo kuwa hadda - iyadoon loo eegin inta ay yihiin - waa 60 Hz .
Dhanka kale, adigoon ka tagin mowduuca shaashadda, waxaa xusid mudan in uu caddeeyay TÜV Rheinland, sidaa darteed ay u tahay badbaado indhaha maxaa yeelay waxay yareysaa falaadhaha buluugga ah ee waxyeellada u geysta. Intaas waxaa sii dheer, markii aad daawaneysid sawirada, in la dhaho ma heysato darajo, inbadan oo kayar ma waxaa jira dalool kudhaca daaqada shaashadda ama nidaamka kamarada lagala noqon karo ee ka sareysa cirifka kore; sidoo kale waxaa jira aqrin sawirka faraha. Kaamirada 8-da ah ee sawir-qaadaha ah (selfie camera) waxaa lagu hayaa qaab-dhismeedka miisaanka dusha sare ee miisaanka culus oo u shaqeynaya sidii qaab-dhismeedka guddiga.
Snapdragon 865 waa Chipset heer sare ah oo awood siiya Nubia Red Magic 5G oo ay weheliso Adreno 650 GPU. 5/8 GB LPDDR12 RAM iyo 3.0/128 GB UFS 256 booska keydinta gudaha. Intaas waxaa sii dheer, baytariga uu mobiilku leeyahay waa 4,500 Mah Mah oo wuxuu la yimaadaa taageero 55 watt tikniyoolajiyad degdeg ah oo lagu buuxiyo.
Si looga fogaado kuleylka ka dib saacadaha dheer ee ciyaarta, Nubia Red Magic 5G waxay la timaadaa nidaam qaboojiye dareere ah oo sidoo kale la socda a nidaamka qaboojinta hawo ee uu wado taageere ku socda qiyaastii 15,000 RPM (kacdoonnadii daqiiqaddii), kaas oo ka caawiya hoos u dhigida heerkulka gudaha illaa 18 ° C oo leh nolol faa'iido leh oo ah saacadaha 30,000, taas oo noqon doonta 3.4 sano ama in ka badan 27 sano oo la ciyaarayo 3 saacadood maalintii.
Kaamirada seddex-geesoodka dambe waxaa hogaaminaya a 686 MP Sony IMX64 shidma weyn, kaas oo ay weheliso xagal ballaadhan oo 8 MP ah iyo muraayadda makro ee 2 MP. Red Magic 5G sidoo kale wuxuu la yimaadaa Android 10 hoosta Nubia lakabaynta iyo taageerada 5G, 4G, WiFi 6, laba GPS iyo laba SIM. Intaa waxaa sii dheer, marka laga yimaado la imaatinka shaqooyin kala duwan oo culeyskiisu yahay 218 garaam, moobiilku wuxuu leeyahay laba kiciya dhinacyadiisa oo loo isticmaali karo in lagu dhaqaajiyo howlaha ciyaaraha; tani waa wax aan horay ugu aragnay Black Shark 3 Pro.
NUBIA SIXIR SIXIR AH 5G
MUUQAAL 6.65-inch AMOLED leh FullHD + xalka 2.340 x 1.080 pixels (19.5: 9) oo leh heerka cusbooneysiinta 144 Hz
PRORESOR Snapdragon 865 oo leh Adreno 650 GPU
Kaydinta Gudaha 128 / 256 GB UFS 3.0
KAAMARKA DAR Triple: 64 MP (dareeraha ugu weyn) + 8 MP (xagal ballaaran) + 2 MP (macro)
KAAMI HORA 8 MP
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 10 hoosta lakabaynta u-habeynta Nubian
BATARY 4.500 mAh waxay taageertaa 55 W kharashka degdegga ah
Isku xirnaanta 5G. 4G. Bluetooth. Wi-Fi 6. USB-C. Afka Nano nano SIM ah. GPS laba-geesood ah
Telefoonka casriga ah ee ciyaaraha ayaa hadda loo heli karaa horay loogu dalbado Shiinaha. Laga bilaabo Abriil, waxaa lagu bixin doonaa suuqa caalamiga ah. Noocyadooda iyo qiimahooda waa sidan soo socota:
Nubia Red Magic 5G 8/128 GB (casaan iyo madow): 3,799 yuan (~ 484 euro ama 543 doolar qiimaha sarifka)
Nubia Red Magic 5G 12/256 GB (wehliyaha): 4.099 yuan (524 euro ama 586 doolar sarifka)
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Nubia Red Magic 5G waa rasmi oo leh shaashadda 144 Hz, Snapdragon 865 iyo dareeraha iyo qaboojinta qaboojinta
Redmi Xusuusin 9 Pro wuxuu rasmi u yahay Snapdragon 720G